Cali Guray oo ku Eedeeyay WADDANI Inay Wadaan Qorshe Lagu Waxyeelaynayo Nabadgelyada Dalka
Hargaysa(Dawan)- Siyaasiga Cali Maxamed Yuusuf (Cali Guray) oo ka mid ah xisbiga KULMIYE, ayaa ku eedeeyay xisbiga WADDANI inay doonayaan in fidmo ka abuuraan doorashadii Guddoomiyaha cusub ee Wakiillada ee Axadii toddobaadkan loo doortay Baashe Maxamed Faarax oo ka adkaaday Xildhibaan Cabdiraxmaan Talyanle oo la tartamayey oo ka tirsan xisbigaas.
“Arrinta baarlamaanka ka dhacday oo si sharaf leh u dhacday laguna tartamay oo la sigay xisbiga KULMIYE iyo xukuumadaba oo hal cod lagu kala badiyay, guushaas waxay ahayd in xisbiga WADDANI haysto,xildhibaankii la tartamayay Baashe Maxamed Faarax wuu hambalyeeyey. sheeko kale oo meel kale ka timid oo aan golaha ka iman ayaa timid oo la yidhi ku murma oo qas geliya, Baashe Maxamed Faarax, laba jeer ayaa gacanta lagu saaray golaha wakiillada, mar saddexaad lagu saari maayo shan farood iyo calaacalna ninka wax ku qaadi karayow soo bandhig burhaantaada waana innoo golihii Hargaysa,”ayuu yidhi Cali Guray oo hadal ka jeediyay xaflad dadweynaha Caynabo ku qaabileen weftiga guddoomiyaha ahna murrashaxa madaxweynaha KULMIYE, Md. Muuse Biixi Cabdi oo booqasho ku maraya gobolka Sool.
Waxa kaloo uu ku dooday in khilaafka wakiillada ay ku jirto far iyo qorshe cadow soo maleegay, waxaannu yidhi; “Waxaannu u arkaynaa in lagu soo duulay amnigii Somaliland oo la doonayo in aanay si nabadgelyo ah oo xalaala u dhicin doorashada madaxtooyadu oo, taasna waxaannu ku difacaynaa wax wal oo aanu u hayno mana dhacayso, markaa waxaan leeyahay candhuuftiina dib u liqa oo wanaagga u soo hanuuna kursigani waxa haystay beesha dhexe oo waan u dagaalamayey oo waxaan lahaa hala siiyo reer Sool. iyagaa ku tartamay oo kala helay, reer Soolna maaha ee far ayaa soo gashay, waana far cadow. waxay ku socotaa in ay fidmo iyo fad-qalalo laga rido Somaliland, taasina maaha mid cidna laga qaadanayo. Somaliland shan farood iyo calaacal marna waxba kumay kala qaadan maantana ku kala qaadi mayso ninka doonaya in uu ku qaado waa beentii.”
Cali Guray waxa uu tilmaamay in xisbiga WADDANI urursaday siyaasiyiintii waddanka ugu xumayd; “Xisbi walba waa gashay cid cusubi uma aan soo gelin KULMIYE inaanu WADDANI cayno oo murrashaxa WADDANI, waanad arkayseen wixii uu Ismaaciil Yare ku hadlayey, waxaanu WADDANI urursaday qofba qofkii uu ka xumaa,waxaanay ku yidhaahdeen waxaad caydaa KULMIYE waxaanay u tageen WADDANI inay fad-qalalo abuuraan,ragii waa weynaa ee xisbiga ahaa way gaabsadeen niman yaryar ayaa xisbiga u tegay fad-qalalo uun,”ayuu yidhi Siyaasi Cali Guray.